သူ့ကို အသက်ကြီးပြီလို့ ပြောတဲ့သူကို အထာကျကျ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ Pink
17 May 2018 . 10:59 AM
Pink တစ်ယောက် တဖြည်းဖြည်း အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့ ကိစ္စကို သူ့ကို သဘောမကျတဲ့သူတစ်ယောက်က Twitter မှာ “Pink looks so old that she should be named purple instead”. ဆိုပြီး Pink ကြည့်ရတာ အရမ်းအိုနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Pink အစား နာမည်ကို Purple လို့ ပြောင်းသင့်ကြောင်း တင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကို Pink က “You must be from la လို့ အစချီပြီးတော့ “ငါ့အသက် ၃၈ နှစ်အတွင်းမှာ မိနစ်တိုင်းဝင်ငွေရနေတာပါ၊ မင်းကရော”လို့ သဘောရတဲ့ စာကို Tweet ပြန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် “အသက်ကြီးလာတယ်ဆိုတာ ကောင်းမွန်ခြင်းတစ်ခုပါပဲ။ မျက်နှာပေါ်မှာ အရေးအကြောင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ အများကြီးရယ်မောခဲ့ပြီးပြီဆိုတာ ပြနေတာပါ”လို့ ပညာသားပါပါ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ဒီလို ပြောကြားချက်ကို သူ့ပရိသတ်တွေနဲ့ Reese Witherspoon တို့လို နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေကလည်း ခုလို ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။
Pink ဟာ တကယ်လည်း အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ရင့်ကျက်မှုတွေနဲ့ လန်းနေဆဲမို့ ဝေဖန်တာကို ဒီလိုမျိုး ခပ်မိုက်မိုက်တုံ့ပြန်နိုင်တာလည်း ဖြစ်ပါကြောင်း။
သူ့ကို အသကျကွီးပွီလို့ ပွောတဲ့သူကို အထာကကြ တုံ့ပွနျလိုကျတဲ့ Pink
Pink တဈယောကျ တဖွညျးဖွညျး အသကျအရှယျကွီးလာတဲ့ ကိစ်စကို သူ့ကို သဘောမကတြဲ့သူတဈယောကျက Twitter မှာ “Pink looks so old that she should be named purple instead”. ဆိုပွီး Pink ကွညျ့ရတာ အရမျးအိုနပွေီဖွဈတဲ့အတှကျ Pink အစား နာမညျကို Purple လို့ ပွောငျးသငျ့ကွောငျး တငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါကို Pink က “You must be from la လို့ အစခြီပွီးတော့ “ငါ့အသကျ ၃၈ နှဈအတှငျးမှာ မိနဈတိုငျးဝငျငှရေနတောပါ၊ မငျးကရော”လို့ သဘောရတဲ့ စာကို Tweet ပွနျလုပျခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ “အသကျကွီးလာတယျဆိုတာ ကောငျးမှနျခွငျးတဈခုပါပဲ။ မကျြနှာပျေါမှာ အရေးအကွောငျးတှရှေိနတေယျဆိုတာ ပြျောရှငျစရာတှနေဲ့ အမြားကွီးရယျမောခဲ့ပွီးပွီဆိုတာ ပွနတောပါ”လို့ ပညာသားပါပါ တုံ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ဒီလို ပွောကွားခကျြကို သူ့ပရိသတျတှနေဲ့ Reese Witherspoon တို့လို နာမညျကွီး အနုပညာရှငျတှကေလညျး ခုလို ထောကျခံခဲ့ပါတယျ။
Pink ဟာ တကယျလညျး အသကျကွီးလာတာနဲ့အမြှ ရငျ့ကကျြမှုတှနေဲ့ လနျးနဆေဲမို့ ဝဖေနျတာကို ဒီလိုမြိုး ခပျမိုကျမိုကျတုံ့ပွနျနိုငျတာလညျး ဖွဈပါကွောငျး။